Họrọ onye na-eweta maka nnukwu ozi - ahụmịhe nke onwe - Geofumadas
Họrọ onye na-eweta maka nnukwu ozi - ahụmịhe nke onwe
Septemba, 2017 Internet na Blogs
Ebumnuche nke atụmatụ azụmaahịa ọ bụla nwere ọnụnọ na ịntanetị bụ mgbe ọ bụla ọ ga-eweta uru. Nke a metụtara ma maka nnukwu ụlọ ọrụ nwere weebụsaịtị, nke na-atụ anya ịsụgharị ndị ọbịa gaa ahịa, yana maka blog na-atụ anya inweta ndị na-eso ụzọ ọhụụ ma jigide iguzosi ike n'ihe nye ndị dị ugbu a. N'okwu abụọ ahụ, njikwa ndebanye aha maka ziga ozi ịntanetị Ọ bụ ihe ịma aka dị oke egwu, na-atụle na mkpebi ọjọọ nwere ike ịkwụsị site na ntaramahụhụ site na ndị nchọta na mmechi saịtị ahụ maka imebi iwu nke iwu obodo ebe a na-akwado saịtị ahụ.
N'ihi mkpa isiokwu a dị, echere m na isiokwu a na ọ bụrụ na mmadụ dere ya maka m afọ ole na ole gara aga, ọ ga-ezere nsogbu nke dugara m ịgbanwe ngalaba na-eweta, mechie saịtị ahụ otu izu wee laghachi weghachite onyonyo a na ntanetị ọchụchọ, ọkachasị Google. Ọ bụ ezie na e nwere ndị na-enye dị iche iche, isiokwu ahụ dabere na nyocha nke ikike Malrelay gbasara MailChimp; kẹle ọ -bụru l'onye hụmaru iya uru.
Enwere ihe doro anya banyere nke a, nke bara uru ikwu. Agbanyeghị site na ọdịbendị izugbe, ndepụta ndị debanyere aha abụghị nchịkọta ozi ịntanetị e si ebe ahụ nweta. Ọ dị mkpa ịnwe onye njikwa nke na-ekwe nkwa na ndenye aha nwere nkwado abụọ. Oge izizi ị ga-anata maka izipu ozi ezighi ezi ga-esi n'aka ndị na-eweta Bochum gị ga-arịọ gị ka ị kwenye otu ị si nweta ndenye aha nke ihe ndekọ email 15 dị na usoro; Ọ bụrụ na ịnwee nkwado abụọ, ị ga-enyerịrị ụbọchị ndenye aha na nkwado nkwado IP, yana ị ga-echekwa akpụkpọ gị; Ọ bụrụ na ịnweghị otu esi enye ozi ahụ ma ọ bụ na ị mejupụtara ya, ngalaba na-eweta ọrụ agaghị enwe mgbagwoju anya ịlụ ọgụ megide onye dị elu karịa ya ma gwa gị na ha enweghị ike inye gị ọrụ ahụ ọzọ; na inwere 7 ụbọchị iji mee nkwado ma kwaga ebe obibi ọzọ. Ma MailChimp na Mailrelay na-enye nhọrọ nkwado abụọ; ọ bụ ezie na ọ kachasị m, m ga-ahọrọ ọrụ nwere sava ndị akwadoro na Europe ma ọ bụghị na United States; oke njirisi, mgbe m nwesịrị ahụmahụ ọjọọ.
Nhọrọ a na-akwụghị ụgwọ maka obere ndepụta.
Maillọ ọrụ ozi Mass na-enye gị ọnụego mbu mgbe kwa ọnwa n’efu.
Dịka ọmụmaatụ, MailChimp na-enye gị nhọrọ nke iziga ihe dị ka 7.5 ozi kwa ọnwa ka ọnụ ọgụgụ ndị na-eso 2.000; ya bu, 15.000 kwa ọnwa.
Mailrelay na-enye gị nhọrọ nke izipu ihe ruru 6.25 email na ngụkọta nke ndị na-eso 12.000, kwa ọnwa: ya bụ, ruo ihe email 75.000 kwa ọnwa, site na ọrụ n'efu.
Ọ baghị uru ikwu, onyinye Mailrelay karịrị MailChimp, na-atụle na site na 1.000 ndị na-eso ụzọ ziri ezi e debara aha ya ewerelarị uru bara uru. Ma ọ dịkarịa ala, yabụ kwuo gurus na isiokwu a.
Ọrụ nkwụnye ụgwọ bara uru.
Ajuju nke kpatara ịkwụ ụgwọ jikọtara ijikwa nnukwu akaụntụ. Inwe ihe karịrị ndị debanyere aha 12.000 bụ ikike akụ na ụba nke na ọ dịghị onye ga-ala n'iyi, belụsọ ma ha eleghara uru ahịa email anya; Maka anyị na Geofumadas, uru nke onye debanyere aha ya ruru $ 4.99; nke ndị debanyere aha 12.000 ga-enwe uru karịrị $ 50.000. Site na ikike a, ọ bụ ihe ezi uche dị na ịkwụ ụgwọ maka ọrụ nke, mgbe ejiri ya, nwere ike ịme atụmatụ Internetntanetị bara uru ma kwalite mmeghe nke ohere ọhụụ.
Na-akwụkwu ụgwọ maka ọrụ ndị na-ebelata ihe ize ndụ nke ịbụ onye edepụtara edebanye aha site na nzipu ozi ọtụtụ. Nke a pụtara izipu site na SMTP na autoresponders, nke anaghị agabiga oke izipu kwa nkeji, yana okike nke tunnels ahịa, ọrụ ndị jikọtara mkpuchi na-eduga na ị gafere oke izipu kwa ọnwa. Ọ bụrụ na anyị gbakwunye na nhọrọ nke nkewa nke ndepụta dabere na njirimara, dị ka obodo ma ọ bụ asụsụ, anyị ga-ekwu okwu karịa ndepụta nkesa dị mfe, ịnakwere ihe omume bara uru bara uru.
Ọ bụrụ n’ị na-atụle ọrụ ozi igwe, ana m atụ aro ka ị lelee Mailrelay. Karịsịa, m na-ahọrọ ya n'ihi na ndị na-eche naanị onwe ha bụ n'efu; Agbanyeghị na ihe ha kpọrọ Smartdelivery masịrị m, nke izipu ozi ịntanetị na-amalite site na ndị debanyere aha ha na-arụsi ọrụ ike, na-ebelata ihe ize ndụ nke ịdaba na spam ma ọ bụ nzacha mgbasa ozi dị ka Gmail na-eme mgbe ezigara email na nnukwu na nwere obere agụ ọgụgụ.
Previous Post«Previous Ànyị na-emikpu anyị n'ezie na usoro "ọhụụ" mgbe ọ bịara na 3D Spatial?
Next Post BIM Ọganihu - Nchịkọta Nzukọ Kwa AfọNext »